Timor atsinanana: Nanoratra tamin’ny fomba fanoratana SMS ny mpanao gazety iray mba hamborahana fanaovana kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2009 14:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, bahasa Indonesia, English
Ny volana Oktobra lasa teo, nanoratra SMS momba ny fandosirany i José Antonio Belo, maintimolalin’ny fanaovan-gazety ao Timor Atsinanana, mba hamborahana fanaovana kolikoly nandraisan’ny Ministry ny Fitsarana any an-toerana anjara. Androany, miatrika fanenjehana noho ny fanalam-baraka ilay mpanao gazety.
Manoratra ao amin’ny gazetiboky mpilaza vaovao Tempo Semanal, namoaka ny antsipirian’ilay fifampiraharahàna teo amin’ny Minisitry ny Fitsarana Lucia Lobato sy ny mpanao afera mpiara-miasa maro amin’ilay fanamboarana ny rindrin'ny fonja ary fitaovana toy ny akanjon’ny mpiambina fonja. Lasan’ny vadin’ilay minisitra ny fifanarahana. Maherin’ny 1 tapitrisa $ ny tombam-bidin’izany fifanarahana izany.
Ity manaraka ity ny SMS nalefa ho an’ny findain’ilay minisitra ny 7 Aogositra 2008, tamin’ny 12:25 avy tamin’izany JS izany:
Nametraka fitoriana ny Minisitra Lobato fa tsy najaina ny fiainany manokana. Niteny ilay mpanao gazety fa nanoratra momba ny nataon’ilay minisitra izy amin’ny maha-olom-panjakana ambony azy, fa tsy ny amin'ny asa maha-olon-tsotra azy. Nanapa-kevitra ny fitsarana fa hohenjehina amina heloka fanalam-baraka ilay mpanao gazety. Raha voaporofo ho meloka izy, mety hijanona enin-taona an-tranomaizina i Belo.
Naneho fankaherezana an’ilay mpanao gazety ny vondrona sy olona maro. Nanome rohy ny Pacific Freedom Forum mankany amina lahatsoratry ny Cafe Pacific izay manamafy fa hitera- bokatra hanakorontana ny fahalalahana hiteny any Timor Atsinanana sy ny sehatry ny haino aman-jery vao misondrotra” io fanenjehana. Manampy izany ireo vondrona:
Tsy manana afa-tsy fahitalavi-pirenena sy foibe fampielzam-peo vitsivitsy fotsiny ny “seahtry ny haino aman-jery vao misondrotra”. 0,1 isan-jaton’ny mponina fotsiny no manana fahafahana mampiasa aterineto izay mahatonga ny gazetiboky toy an’ny Tempo Semanal (gazetin’i Belo) ho loharanom-baovao voalohany any an-toerana.
La’o Hamutuk, fikambam-piaraha-monina sivily iray, dia niteny fa
Diso fanantenana i Carmel Budiardjo ao amin’ny TAPOL, gazety momba ny zon’olombelona, fa ilay lalàna nampiasain’ny Indoneziana hanafoanana ny fahalalana manao gazety tao amin’ny firenena no ampiasaina amin’ny Belo ankehitriny, mpiaro mahafatra-po ny fahalalahana manao gazety::
Misy ny fanangonan-tsonia an-tranonkala mangataka amin’ny governemantan’ny Timor Atsinanana mba hanatsahatra ny fanenjehana an’i Belo.